သင်မသိသေးသောအကောင်းဆုံး Google Maps အသစ်သုံးခု Androidsis
၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ပုံရသည်၊ သို့သော် Google Maps သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အချိန်အကြာကြီးနှင့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းရှိခဲ့သည် အေးမြအသစ်သောအင်္ဂါရပ်များပေါ်ထွန်းခဲ့ကြပြီဤမြေပုံ app သည်၎င်း၏အစပြုခြင်းနှင့်များစွာကွဲပြားခြားနားသောအခြားအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ငါတို့မင်းကိုပြောပြမယ် အအေးဆုံးဂူးဂဲလ်မြေပုံအသစ် ၃ ခု ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များအတွင်းသင်ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည်မည်သည့်အရာများသိရှိနိုင်သည်ကိုသင်သိရှိပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ စတင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ မကြာသေးမီလများကရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း features အသစ်။
1 စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်သင်သွားမည့်နေရာအတွက်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မဲပေးပါ
2 အချိန်နှင့်တပြေးညီအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူရောနှောထားသော mode
ဂူဂဲလ်မြေပုံတွင် စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကော့တေးဘားများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများကဲ့သို့သောနေရာများစွာရှိသည်, အားကစားခန်းမများနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်မှု။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မကြာသေးမီကမြေပုံ app အတွက်အလွန်ကြီးစွာသောအသစ်အဆန်းစတင်ခဲ့သည်။ လာမယ့်စနေနေ့ညစာစားဖို့သွားမယ့်နေရာဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေမှာအတူတူနေမယ့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ အဆက်အသွယ်တွေအကြားမှာမဲပေးနိုင်စွမ်း။
ဒီဟာကအရမ်းလွယ်တယ် ကျွန်ုပ်တို့တွင်အနှစ်သက်ဆုံးသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်။သင်လိုချင်တဲ့သူကိုတောင်မှမျှဝေနိုင်တယ်), ငါတို့ pizzeria ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး ပီဇာတွေသေစေတဲ့နေရာ၊ ငါတို့စားသောက်ဆိုင်ကငါတို့နိုင်ငံကဘယ်နေရာမှာမဆိုဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ၎င်းစာရင်းကိုမဲပေးမည့်အဆက်အသွယ်များ (သို့) သူငယ်ချင်းများစာရင်းတစ်ခုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအားကြော်ငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုမည်။
မည်သူမဆို site တစ်ခုအကြံပြုနိုင်ပါတယ် ငါတို့အားလုံးမဲပေးနိုင်အောင်နောက်ဆုံးတော့ငါတို့အချို့ mojitos ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်။
နောက်ထပ်ဂူဂဲလ်မြေပုံသို့ရောက်ရှိလာသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများ၊ ယခုအချိန်တွင်ဒေသတွင်းပေမယ့် (ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါ့အပြင်သင့်ဒေသကိုလည်းရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်)၊ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဦး တည်ရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးအမြန်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုပေးမည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုပေးပါ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများမှတဆင့်။
ဆိုလိုသည်မှာ အကယ်၍ သင်အစွန်အဖျားမှမြို့လယ်ခေါင်သို့သွားရန်ရွေးချယ်ပါကဂူးဂဲလ်မြေပုံသည်ထိုနေရာရောက်ရန်အချိန်ယူမည့်အချိန်နှင့်လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံကိုသင့်အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ မြေအောက်ရထားဘူတာကိုလမ်းလျှောက်ရင်းသင်မြေအောက်ရထားသွားစဉ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည် ရထားဘူတာသို့သွားပြီးအကွာအဝေးကိုတိုစေရန်ကားကိုဖမ်းရန်ပိုကောင်းလျှင်ပင်; သင်ကားရပ်နားထားရသည့်တိုင်သင့်ကိုပြောပြလိမ့်မည်.
သင်တစ် ဦး ဦး တည်ရာကိုရွေးချယ်ပါ.
အကြံပြုထားသောလမ်းကြောင်းများမှသင့်ကိုစိတ် ၀ င်စားသောအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အမြန်ဆုံး။
ကျနော်တို့လာမယ့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ« Start »ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်မှာရှိသလဲ၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီလုပ်ဆောင်နေသောတိုင်းပြည်တစ်ခု၌ရှိလျှင်မြေပုံများကပြလိမ့်မည်။ ငါတို့ရထားဒါမှမဟုတ်ဘတ်စ်ကားတွေဘယ်လိုချဉ်းကပ်လာတယ်ဆိုတာကြည့်ရလိမ့်မယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ရောက်ရှိမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မှအချိန်မီထွက်ခွာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ငါတို့သွားမည့်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မီထရိုမည်သို့ရွေ့လျားနေသည်ကိုအချိန်မှန်ကြည့်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်အလွန်အံ့သြစရာပင်။ ယခုငါတို့သုံးနိုင်သည် အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းကြောင်း၏တိုးတက်မှု၏ function ကို အခြားအက်ပ်များနှင့်ဆိုလျှင်တစ်ဆယ်ထက်ပိုသောအရာများရှိသည်။
Y က es ရောက်ရှိလာသောနောက်ဆုံးပေါ်သတင်း ဒီနေ့ Google Maps ကို ဆိုလိုသည်မှာ WhatsApp တွင်လည်းရရှိနိုင်သောကြောင့်သင်တည်နေရာကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသင်လိုချင်သည့် app နှင့်မျှဝေနိုင်သည်။ WhatsApp, Telegram အတူတူပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည် SMS မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကဲ့သို့ဖြစ်စေ။
သင်၏အဆက်အသွယ်များသည် သင့်ခရီးစဉ်၏တိုးတက်မှုကိုအမှန်တကယ်အချိန်မြင်နိုင်သည် ဂူဂဲလ်မြေပုံများမှတဆင့်၎င်း၊ ကပြီးဆုံးသောအခါအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ထူးခြားချက်မှာ၎င်းမြေပုံကိုသင်မည်သည့်အက်ပ်နှင့်မျှဝေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ဂူဂဲလ်မြေပုံအက်ပ်အတွက်အလားအလာများစွာပေးသည်။
သင် ဦး တည်ရာကိုရှာနေသည် သင်လမ်းကြောင်းကိုစလိုက်ပါပြီ
ရွေးချယ်စရာများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ပါ "ဘယ်သွားမလို့လဲ".
ဤနည်းအားဖြင့် link ကိုလက်ခံရရှိသူသည် Google Maps မှသင်သွားလိုသည့်နေရာသို့မည်သို့သွားမည်ကိုအချိန်မှန်ကြည့်ရှုနိုင်လိမ့်မည်။ အတိအကျ, သင်မသိကောင်းသိနိုင်သောဂူဂဲလ်မြေပုံ၏အလွန်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက် (၃) ခု ပြီးတော့ဒီကနေ့သူတို့က Google မြေပုံအက်ပ်ကိုသုံးပြီးမင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတောင်ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။ ကြိုက်တယ် နေ့စဉ်လမ်းကြောင်းအတွက်ဖြတ်လမ်းထားနိုင်ပါလိမ့်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းဂူဂဲလ်မြေပုံသစ်သုံးမျိုးသည်